Ajụjụ - Ningbo Artmetal Products Co., Ltd
Deep Enyi Parts
Deep Enyi Parts Assembly
Gịnị bụ miri ịbịaru?
Deep ịbịaru bụ a mpempe akwụkwọ metal akpụ usoro nke a mpempe akwụkwọ metal oghere na-radially dọbara a akpụ anwụ site n'ibu edinam nke a ntụmadị. The usoro a na-ewere "miri emi" ịbịaru mgbe omimi nke na-adọrọ mmasị akụkụ karịa ya dayameta
Olee ụdị ihe ime ARTMETAL ọrụ na?
N'ihi na miri ịbịaru, ihe onwunwe nhọrọ ndị sara mbara nke ukwuu na ọ fọrọ nke nta niile azụmahịa ọla esichara dị na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ eriri igwe ụdị n'ihi miri ịbịaru. Isi ihe onwunwe anyị na-eji bụ igwe anaghị agba nchara 200-400 usoro. Ngwaọrụ ndị ọzọ CRS, aka elekere, aluminum, ọla, ọla kọpa bụ ihe dị, kwa.
Gịnị bụ ihe onwunwe thicknesses ARTMETAL ọrụ na?
0,1016 mm ka 9,525 mm (004 "na .375")
Gịnị tolerances nwere ike ARTMETAL nweta?
Na a Nchikota dies na sekọndrị machining anyị nwere ike inye tolerances ruo .00254 mm (.0001 ")
Gịnị bụ ARTMETAL abụọ arụmọrụ ike?
ịme ọpịpị, mkpọpu ala, ịgbado ọkụ (TIG, mig, ntụpọ), PEM, stud, standoff insertions, riveting, mgbakọ, electro-polishing, n'ibu polishing (hairline, mirror), uzuzu mkpuchi, ájá ọgbụgba ọkụ, passivation, plating
Olee otú m ga-esi e kwuru?
Ị nwere ike izipu RFQ ka anyị na nghọta ma ọ bụ n'omume ma ọ bụ ọbụna drafts na-eme atụmatụ ibu, anyị ga-enye gị n'ime 2-arụ ọrụ ụbọchị.
Gịnị Eserese nwere ike ARTMETAL ọrụ na?
JPG, PDF, DWG, DXF, ntụpụ ụkwụ, IGS, wdg.
Gịnị bụ ARTMETAL si ugwo okwu?
Olee otú m nwere na-akwụ?
T / T, L / C, D / P, n'ebe ọdịda anyanwụ n'otu, wdg Anyị na-eji ihe mbupụ na mbubata gị n'ụlọnga na-enweta ugwo na mbupu akwụkwọ na-agbala na aha anyị n'ụlọnga. Anyị na-e-arụ ọrụ na anyị esenidụt ahịa karịrị afọ (Anyị isi ọrụ na-n'ichepụta na Ụgha).
Olee otú Artmetal ekwe nkwa àgwà?
Artmetal bụ ISO9001 gbaara, onwem na ala-nke-na-art igwe na nwere ọrụ nwere nkà, ahụmahụ engineering otu na-elekọta ọ bụla mmepụta nzọụkwụ. Ọ bụrụ na anyị nwere àgwà nke, anyị ga-emezi ma ọ bụ dochie na akụ ma ọ bụ nkwụghachi gị ego.